यो हाम्रो स्वास्थ्य कायम गर्न भिटामिन महत्त्व overestimate गर्न गाह्रो छ। तिनीहरूलाई को - B5 - भन्दा एक पुरा यसको व्यक्तिगत प्रक्रियाहरू रूपमा सम्पूर्ण शरीर मा एक अनुकूल प्रभाव छ कि एक भिटामिन। यो यति उपयोगी के हो, यसको कार्य के हो र यो कहाँ फेला पार्न? हामी सँगै सिक्न!
B5 - भिटामिन pharmacists र चिकित्सकहरु "pantothenic एसिड" नाम छ। यसलाई तरकारी, फल, जामुन वा सिमी हुन कि यो लगभग सबै उत्पादनहरु मा पाइन्छ। कुनै आश्चर्य ग्रीक मा "pantoten" "हर एक ठाँउ।" अर्थ गरेको नजिक यो उपयोगी भिटामिन मा एक हेरौं।
pantothenic एसिड को खोज 1933 मा भयो र वैज्ञानिक रोजर विलियम्स स्वामित्वमा छ। कृत्रिम एनालग भिटामिन B5 को पहिलो अन्तिम शताब्दीको मध्य 40-एँ मा संश्लेषित थियो। यो 77-80 डिग्री सेल्सियस को एक तापमान मा पिघलने जो एक yellowish प्लास्टिक पदार्थ छ। पूर्ण पानी र इथेनल मा घुलनशील Pantoten, तर तुरुन्तै अम्लीय र alkaline वातावरण संग उच्च गर्मी वा सम्पर्क सबै गुण हराउछ।
प्राकृतिक भिटामिन B5 सानो आन्द्रा मार्फत अवशोषण गरेर हाम्रो शरीर मा हुन्छ। त्यहाँबाट, यो रगत मा सिधै हुन्छ, रातो रक्त छानिएन र coenzyme ए भिटामिन B5 रहिरहन्छ मा परिवर्तित छ, शरीर भर खुलेर घुमफिर समान रूप ले Tissues भर वितरण।
B5 - कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, बोसो, कोलेस्ट्रल, हेमोग्लोबिन र अन्य पदार्थ को चयापचय संलग्न भएको एक भिटामिन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम B5 द्वारा प्रदर्शन - बारी मा यस्तो एलर्जी, संबंधी बृहदांत्रशोथ, हृदय आक्रमण र गठिया रूपमा गम्भीर रोग विरुद्ध शरीर रक्षा जो adrenal हर्मोन, को उत्पादन उत्तेजक छ। संग pantotena शरीर मद्दत सक्रिय विभिन्न रोगहरु, विशेष गरी सार्स एंटीबडी र प्रतिरक्षा उत्पादन गर्छ। साथै, यो चमत्कार भिटामिन वृद्ध र जीवन prolongs slows।
जब pantothenic एसिड adrenocortical को पर्याप्त रकम तथाकथित glucocorticoids उत्पन्न गर्छ। यो भडकाऊ प्रक्रिया छिटो सबै प्रकारका सामना गर्न साथै यो भन्दा-भोल्टेज, अधिभार, संक्रमण र जीवाणुहरू देखि रक्षा शरीर मद्दत गर्छ कि हर्मोन छ।
त्यो भिटामिन B5 जस्तै, शरीर मा यस्तो प्रक्रिया भाग इन्जाइमहरु को एक नम्बर, साथै उत्पन्न:
ऊर्जा ब्यालेन्स सुधार;
प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो;
घाउ र खरोंच निको छाला को पुनर्जनन,;
स्मृति सुधार र एकाग्रता;
हृदय को मांसपेशी को उचित सञ्चालनको उत्तेजना।
खैर, मस्तिष्क गतिविधि यस महत्त्वपूर्ण भिटामिन मा हदसम्म निर्भर छ: B5 सक्रिय बिजुली दलहन neuron देखि neuron गर्न प्रसारित छन् कारण जो पदार्थ, को संश्लेषण संलग्न। यी रसायन भनिन्छ neurotransmitters छन्। तिनीहरूलाई बिना, मस्तिष्क स्पर्श, गन्ध, सुनेर दृष्टि जस्ता सचेत देखि आदेशहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुने छैन। भिटामिन B5 कमी स्मृति मा स्वाद र odors, र खतरा उपस्थिति असफलता एक कमी धारणा प्रकुपित सक्छ।
खैर, pantoten रक्सी र निकोटीन को नकारात्मक प्रभाव हाम्रो मस्तिष्क रक्षा कि एंटीबडी, त्यसैले मानिसहरू रक्सी पिउन विशेष गरी यदि धूम्रपान, synthesizes, भिटामिन B5 अत्यावश्यक छ।
गार्ड अनुरूप मा
लिपिड चयापचय को normalization संलग्न भएको एक भिटामिन - आफ्नो वजन हेर्दै वा वजन लागि आहार लीन भएका मान्छे, यो कि B5 थाहा आवश्यक छ। अर्को शब्दमा, यो बोसो बिग्रनु गर्न मद्दत गर्छ र ऊर्जा तिनीहरूलाई धर्मान्तरित। यो विशेष गरी choline संग संयोजन प्रभावकारी हुन्छ, भिटामिन को सी, riboflavin, niacin र भिटामिन डी संयोजन मा यी भिटामिन मोटोपना विरुद्ध लड्न मदत गर्न।
एक, दुई, तीन, चार, पाँच - म B5 हेर्न जाँदै छु!
केही दशक पहिले, शरीर मा B5 कमी सम्बन्धित भिटामिन कमी, शायद क्रेन भेटे। मान्छे जैविक खाद्य खाए र यसरी pantotena संख्या अप गरे। के खाद्य पदार्थ भिटामिन B5 को उच्चतम मात्रा समावेश?
डेयरी उत्पादनहरू: दूध, पनीर, चीज।
मासु: मासु, बाछाको मासु, पोर्क।
माछा: ट्राउट माछा, गुलाबी सामन।
मशरूम: shiitake, chanterelle, मशरूम, र सिपी मशरूम;
फल: सुकेका केले, persimmons, नेभारा, avocados, मिति, खुबानी, kiwi, छाँट्दछ।
तरकारी: सुकेको टमाटर, ब्रोकोली, मिठाई आलु, काउली, लसुन, आलु, parsnips, artichokes र यरूशलेममा artichokes।
अनाज र अनाज: चामल, जई र गहुँ चोकर, मकै, अनाज।
बीउ र पागल: flaxseeds, पिस्ता, बदाम, सूर्यमुखी बीउ, अखरोट, filberts, काजू, अखरोट, कद्दू बीउ, बादाम।
फलियां: सिमी, Mung बीन, मटर, भटमास, chechvitsa, छोला।
समुद्री शैवाल: सिवार, agar-agar, nori, spirulina।
मसला, जडीबुटी: अजवायन, मरिच, पुदीना, तुलसी, लाल शिमला खुर्सानी, साग।
अर्द्ध-उत्पादन समाप्त हाम्रो दिनमा, जब हामी धेरै शक्ति अप गरेको छ, र उत्पादनहरु उत्पादनहरु र यदि GMOs, भिटामिन B5 समावेश बहुमत फेला, धेरै सानो रकम। निम्नानुसार pantothenic एसिड को कमी को परिणाम स्वरूप प्राय प्रकट गर्दै:
निराश, अवसाद, irritability;
प्रदर्शन, ऊर्जा अभाव घट्यो;
टाउको दुखाइ, वाकवाकी;
मांसपेशी दुखाइ, को खुट्टा मा heaviness;
को औंलाहरु को numbness;
पेट दुखाइ, पखाला।
यसबाहेक, भिटामिन B5 को कमी, जसबाट विभिन्न संक्रमण विरुद्ध शरीर का रक्षा कम, कमजोर प्रतिरक्षा गर्न जान्छ।
अर्को रोचक तथ्य pantothenic एसिड विशेष एमिनो एसिड, एकदम विभिन्न दबाइहरु को साइड इफेक्ट कम जो उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ भन्ने छ।
कहिल्यै पनि धेरै?
के hypervitaminosis हुन्छ, कि भिटामिन B5 एक overabundance छ? ठीक इंजेक्शन को पाठ्यक्रम इरादा जब यो मात्र हुन सक्छ। Hypervitaminosis पखाला र छाला फीकापन द्वारा प्रकट गर्नुभयो। को मूत्र मार्फत उत्पादन को Oversupply।
भिटामिन B5 मिलीग्राम मा मापन गरिएको छ। 15-20 मिलीग्राम, र बच्चाहरु को लागि - - 2-4 मिलीग्राम वयस्कहरूको लागि दैनिक दर pantotena गर्भवती र स्तन-रुचाउने लागि 10-12 मिलीग्राम छ। भिटामिन B5 को वृद्धि सेवन घाइते छन् सर्जरी गरेका, मान्छे को लागि आवश्यक छ, तिनीहरूले भारी शारीरिक गतिविधिमा संलग्न वा पाचन समस्या छन्।
कसले pantotel आवश्यक छ?
pantothenic एसिड लागि शरीर आवश्यकता सम्भव छ सामान्यीकरण। पर्याप्त भिटामिन B5 ट्याब्लेटको Poprinimat। आत्म-दबाइ, खराब नतिजा नेतृत्व त लागूपदार्थको एक डाक्टर संग परामर्श गर्नुपर्छ लिएर अघि सक्नुहुन्छ कि सम्झना!
के गवाही अन्तर्गत भिटामिन B5 ट्याब्लेटको लिनुपर्छ?
विभिन्न चयापचय प्रक्रियाहरू को उल्लंघन;
यस्तो एक्जिमा रूपमा छाला rashes,;
तीव्र र क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा;
को जठरांत्रिय पर्चा र कलेजो को रोगहरु;
गर्भावस्था को toxemia।
एक दोस्रो विचार ...
के औषधिको खुराक प्रयोग गर्न भिटामिन B5? प्रयोगको लागि निर्देशन, नियम, दबाइ गर्न एनोटेसन छ र लाइनर मुद्रण छ। बच्चाहरु को लागि - सामान्यतया, दैनिक खुराक 40-80 एक वयस्क लागि मिलीग्राम, र 10-40 मिलीग्राम छ।
तर, यी खुराक बावजुद, पाटी को नम्बर उपचार चिकित्सक को आवश्यकताहरु फरक हुन सक्छ।
म इंजेक्शन को डर छैन
केही अवस्थामा, बरु ट्याब्लेटको डाक्टर को सल्लाह दिन्छन् सक्छ vials मा भिटामिन B5 intramuscular इंजेक्शन लागि। खैर, तरल B5 को परिचय निकै कष्टकर छ, तर यो आक्रामक विधि तपाईंले चाँडै सकेसम्म pantotena घाटा भर्न अनुमति दिन्छ। को ampoules दुर्लभ शुद्ध भिटामिन B5। प्रयोगको लागि निर्देशन सामान्यतया इंजेक्शन तरल भिटामिन बी को अन्य सदस्यहरु बारेमा जानकारी समावेश
शानदार कपाल को धरौटीको
हामी पनि भिटामिन B5 बाल दिन्छ कि लाभ उल्लेख गर्नुपर्छ। "भिटामिन B5 समावेश गर्दछ।" केही लागि किनभने विज्ञापन शैंपू र मास्क संग लगभग सबै बोतल चिन्ह लगाइएको छैन उहाँले यति राम्रो के हो र कस्तो कदम छ? यो जसबाट आफ्नो fragility कम, आफ्नो चिस्यान मा बाल विकास, साथै ढिलाइ बढावा भन्ने तथ्यलाई। किनभने यो कपाल को भिटामिन विरंजन वा perming जस्तै दोकान manipulations को विफलता पछि पुनःस्थापित छन्। सही प्रयोग गर्दा, B5 बाल थप चमकदार र रसीला बन्नेछ। धेरै राम्रो तरिकाले सँगै भिटामिन B5 + B6: यो "tandem" बाल बलियो र बाल हानि रोक्छ, तिनीहरूले, चिल्लो रेशमी र बलियो हुन्छन्।
बाल भिटामिन B5 ampoules आवश्यक छ मदत गर्न। पाटी, पनि rastolchonnye पाउडर मा, तेल तरल जस्तै प्रभाव दिन छैन। कहाँ र भिटामिन B5 थप्न कति? निर्देशन सरल छ:
आफ्नो मनपर्ने स्याम्पु podohodyaschuyu क्षमता राशि धोइदिनुभएर लागि आवश्यक कास्ट।
भिटामिन B5 को तेल समाधान केही घटेको थप्नुहोस्।
lather राम्रो, राम्रो भिजेको कपाल मा शैंपू लागू, 3-5 मिनेट को लागि छोडेर कुल्ला।
आवश्यक छ भने, यस्तै प्रक्रिया एक बाम वा कपाल मास्क लगाएको बारम्बार गर्न सकिन्छ।
यो एकदम, बाल अवस्था सुधार गर्ने निर्विघ्नता र चम्कने थप्न, brittleness हटाउनु, टिप को क्रस-खण्ड बाधा, नियमित हुनेछ, विशेष गरी यदि भिटामिन B5 यस्तो प्रयोग, आफ्नो जाँगरको र स्वास्थ्य पोषण।
स्वास्थ्य र दीर्घायु को संरक्षण मा पाठ्यक्रम
अर्डर स्वस्थ हुन र सकेसम्म लामो समयसम्म बाँच्न मा, ध्यान दिएर आफ्नो स्वास्थ्य सुन्न। तपाईं भिटामिन B5 को कमी को माथि लक्षण नोटिस भने, परामर्श लागि आफ्नो डाक्टर जानुहोस्। सायद तपाईंको डर पुष्टि गर्दै छन्, र तपाईं उपचार को एक पाठ्यक्रम हुनेछ। पहिले नै केही हप्ता भिटामिन B5 को स्वागत को शुरुवात पछि, तपाईं पक्कै पनि आफ्नो अवस्थामा सुधार महसुस हुनेछ।
भिटामिन B5 को सन्तुलन कायम गर्न खान सुकेको खुबानी र छाँट्दछ आफैलाई मसला संग माछा Indulge र तरकारी पकाउन निकै लामो छैन: प्रयास गर्नुहोस्। भिटामिन, जो निर्देशन निर्दिष्ट दर यो भन्दा बढी छैन आवश्यक - र डाक्टर अझै पनि pantothenic एसिड सल्लाह दिन्छन् भने, कि B5 सम्झना। र त्यसपछि दीर्घायु साथ स्वास्थ्य प्रदान गरिनेछ!
हानि प्रोटिन: कहाँ - एक मिथक छ, र जहाँ - एक वास्तविकता?
"Biomax" -Vitamin: समीक्षा र मुख्य विशेषताहरु
कसरी गणित समस्या समाधान गर्न एक बच्चा सिकाउन?
एक नाक बिना हात्ती के हो? lyuboznaek लागि प्रतिक्रियाहरू एक अधिकता
प्राकृतिक अवस्था र Norilsk औद्योगिक हब को भौगोलिक स्थिति
"ब्रिगेड" मा कति एपिसोडहरू र प्लान कसरी विकसित हुन्छ?
छोराछोरीको Autism, लक्षण के हो
Rotavirus: लक्षण र उपचार
पूर्व kalendar.1989 वर्ष - जो पशु privechali?
शैक्षिक मनोविज्ञान को तरिका - समान विज्ञान र सम्बन्धित विज्ञान संग मतभेद
छोराछोरी, प्रतिक्रिया र सिफारिसहरू लागि inhalers चयन गर्न के